NaKolivas akazivisa chinangwa chake chekusiya basa rake paLinux Kernel | Linux Vakapindwa muropa
NaKolivas akazivisa chinangwa chake chekusiya basa rake paLinux Kernel
NaKolivas (programmer akashanda paLinux kernel uye pakuvandudzwa kweiyo CGMiner yekuchera software) akazivisa Mazuva mashoma apfuura chinangwa chako chekumira kugadzira mapurojekiti ako paLinux kernel inoitirwa kuita kuti mushandisi mabasa anyatsoteerera uye nekudyidzana.
Kunyanya taura izvo inomisa kusimudzira kwese kune hukama mugadziri webasa MuQSS (Multiple Queue Skiplist Shedhiyo, yakambogadzirwa pasi pezita BFS) y kuchinjika kweiyo seti ye zvigamba "-ck" yeshanduro nyowani dzekernel.
Icho chikonzero chechinangwa chakataurwa ndechekuti nekuda kwekurasikirwa kwechido mukusimudzira yeLinux kernel mushure memakore makumi maviri emabasa kufanana uye kutadza kudzoreredza zvekare kukurudzira mushure mekudzokera kumabasa ekurapa panguva yeCovid19 denda (nedzidzo, Kon chiremba weanesthesiologist uye panguva yedenda akatungamira chirongwa chekugadzira dhizaini nyowani dhizaini uye kushandiswa kwe3D kudhinda kugadzira zvikamu zvine hukama) .
Zvinokosha kuti muna 2007 naKolivas akange atomira kugadzira zvigamba "-Ck" mune mamiriro ekusagona kusimudzira zvigamba zvako kune huru kernel Linux, asi ndokuzodzokera mukuvandudza.
Asi zvino taura izvozvo kana nguva ino ukasawana chinokurudzira kuenderera mberi nekushanda, ipapo iyo 5.12-ck1 chigamba kuburitswa ichave yekupedzisira.
Ukuru hwesosi yangu yemushandisi inoita kunge iri kudzikira nekufamba kwenguva, uye ndiri kufamba ndichienda kure kure nezviri kuitika muLinux kernel space, nemakumi ezviuru zvezvimwe zvinhu zvichindinetsa munguva yangu yekusara.
Kunyangwe hazvo ini ndichiri kuda kumhanyisa yangu kernel pane yangu Hardware, ndine dambudziko rekukurudzirwa mushure memwedzi yekupedzisira gumi nemana yekupenga kwepasirese nekuda kweCovid18 uye ndinonzwa sekunge ndinofanira kuunza chigamba ichi kumugumo wakanaka. Yangu yekutanga Linux kernel zvigamba zvakadzokera kumashure makore makumi maviri uye, pamwe pasina kana chishuwo chekushanda pavari, ndinofunga vangangodaro vakundwa nenzira.
Nehurombo, iniwo handina rutendo rwekuti kune mumwe munhu wandinogona kuvimbika kwaari kumupa kodhi seanomutsiva, sezvo anenge maforogo ese andaona mubasa rangu anga aine matambudziko andakaedza kunzvenga.
Iwo "-ck" zvigamba, kuwedzera kune programmer MuQSS, kuti kuvandudzwa kwebasa reBFS kunoenderera, inosanganisira akasiyana shanduko anokanganisa ndangariro manejimendi, kutanga kubata, kugadziridza nguva, uye kugadzirisa kernel.
Chinangwa chakakosha chezvimedu ndechekusimudzira kupindurwa kwekushandisa pane desktop. Sezvo shanduko dzakarongedzerwa dzinogona kukanganisa kushanda kweeserver masystem, makomputa ane huwandu hukuru hweCPU cores uye anoshanda pasi pemamiriro ekuitwa panguva imwe chete kwehuwandu hwakawanda hwemaitiro, mazhinji shanduko dzaCon Colivas dzakarambidzwa kutambirwa mune huru kuumbwa kweiyo tsanga uye yaifanirwa kuichengeta muchimiro cheimwe seti yezvimedu, inochinjika kune yega yega vhezheni yenyuchi.
Iyo yekupedzisira kugadzirisa ye "-ck" bazi kwaive kuchinjika kweshanduro 5.12 tsanga. Kuburitswa kwe "-ck" zvigamba zveiyo 5.13 kernel kwakasvetwa uye mushure mekunge 5.14 kernel yaburitswa, chinangwa chaive chekumisa kutamira kune nyowani vhezheni yekernel.
Pamwe iyo Liquorix uye Xanmod mapurojekiti, iyo yatove kushandisa zviitiko zveiyo seti--ck », ivo vanozogona kutora kubva pane chigamba kugadzirisa.
NaKolivas iwe unoda kuchinjisa kugadzirisa kubva pazvimedu kune mamwe maoko, asi iwe haufunge kuti iyi mhinduro yakanakasezvo kuyedza kwese kwekare kwekugadzira maforogo kwakakonzera matambudziko awakaedza kunzvenga.
Kune vashandisi vanoda kutora mukana wakazara weiyo huru kernel pasina kuisa muQSS scheduler kwairi, Con Kolivas anotenda kuti nzira iri nyore uye inoshanda kwazvo yekuita izvi ndeyekufambisa zvigamba kuwedzera HZ yekukanganisa chizvarwa chezera kusvika 1000Hz.
Pakupedzisira sKana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » NaKolivas akazivisa chinangwa chake chekusiya basa rake paLinux Kernel
Xiaomi ajoina iyo OIN, iyo Linux patent yekuchengetedza chirongwa
BusyBox 1.34 inosvika iine zvitsva zvinoshandiswa, kugadzirisa uye nezvimwe